Izaziso Ezijwayelekile Ezi-6 Ezijwayelekile ze-INTERPOL Nalokho Ongakwenza Ngazo | Izinkampani Zomthetho eDubai
6 Izaziso Ezijwayelekile ze-INTERPOL Red nokuthi Yini Ongayenza Ngazo
Ukulwa nobugebengu emingceleni yamazwe kungaba yinto enkulu. Ngenhlanhla, i-INTERPOL eminyakeni edlule izibonakalisile inkulu ekulweni nobugebengu obenziwe emingceleni kazwelonke.
Ngokuchofoza nje inkinobho eyodwa, abakwa-INTERPOL bangathola futhi babelane ngalo lonke ulwazi nemininingwane edingekayo ukuze kuboshwe okwesikhashana isigebengu esisolwa, ekhaya noma phesheya. Lolu lwazi nedatha ngokuvamile kwabelwana ngayo namazwe angamalungu ngendlela yezaziso ezinemibala.
Futhi kuzo zonke izaziso eziyisikhombisa ze-INTERPOL eziqashelwa emazweni, isaziso esibomvu sinzima kakhulu futhi, ngeshwa, sihlukunyezwa kakhulu. Eqinisweni, le nhlangano isolwe ngokusisebenzisa kabi lesi saziso futhi isisebenzise ukufaka ohlwini lwabantu abamnyama ngaphandle kwesizathu.
Ingabe lokhu kufanele kwenzeke? Kulesi sihloko, uzoqonda ukuthi siyini isaziso esibomvu nokuthi ungazivikela kanjani uma ukhishwa ngokumelene nawe.
Isaziso Esibomvu yisaziso sokubheka. Kuyisicelo sokuthi abomthetho bamazwe omhlaba wonke baboshwe okwesikhashana kusolwa isigebengu. Benza lokhu kuboshwa kwesikhashana kusalindwe ukuzinikela, ukubuyiselwa kwamanye amazwe, noma ezinye izinyathelo zomthetho.
I-INTERPOL imvamisa ikhipha lesi saziso ngokuyalelwa izwe eliyilungu. Akudingeki ukuthi leli lizwe kube yikhaya lomsolwa. Kodwa-ke, kufanele kube yizwe lapho kwenzeke khona leli cala.
Ukukhishwa kwezaziso ezibomvu kusingathwa ngokubaluleka okukhulu kuwo wonke amazwe. Kusho ukuthi umsolwa okukhulunywa ngaye uyingozi kwezokuphepha komphakathi futhi kufanele aphathwe kanjalo.
Isaziso esibomvu, noma kunjalo, akusona isigunyazo sokuboshwa kwamazwe omhlaba. Isaziso somuntu ofunwayo nje. Lokhu kungenxa yokuthi i-INTERPOL ayikwazi ukuphoqelela ukuphoqelelwa komthetho kunoma yiliphi izwe ukuthi kuboshwe umuntu odalulwa ngokubomvu.
Izwe ngalinye eliyilungu linquma ukuthi yiliphi inani elisemthethweni elibeka kuSaziso Esibomvu nasegunyeni leziphathimandla zabo zokuphoqelela umthetho ukubopha.
UPancho Campo wayenguchwepheshe wethenisi waseSpain futhi engusomabhizinisi enamabhizinisi asungulwe e-Italy naseRussia. Ngesikhathi ethatha uhambo, wavalelwa esikhumulweni sezindiza e-US futhi wadingiswa ngezizathu zokuthi unikezwe isaziso esibomvu esivela e-UAE.
Lesi saziso esibomvu besikhishwe ngenxa yengxabano ebiphakathi kwakhe nalowo abesebenzisana naye kwezamabhizinisi eDubai.
Uzakwethu kwezamabhizinisi wayesole uCampo ngokuvala inkampani yakhe ngaphandle kwemvume yakhe. Lokhu kuholele ekutheni kuqulwe icala yena engekho. Ekugcineni, inkantolo yamkhipha enecala lokukhwabanisa yabe isikhipha isaziso esibomvu nge-INTERPOL esimelene naye.
Kodwa-ke, walwa naleli cala futhi wasindisa isithombe sakhe ngemuva kweminyaka eyi-14 yokulwa.
Ngokwemithetho yayo, isaziso esibomvu asikwazi ukukhishelwa ababaleki egameni lezwe ababalekela kulo. Ngaleyo ndlela, akumangazanga ukuthi ukukhishwa kwesaziso esibomvu esasibhekiswe ku-Al-Araibi kwahlangabezana nentukuthelo yomphakathi njengoba wayengumbaleki obalekela uhulumeni waseBahrain.
Ekugcineni, isaziso esibomvu sasuswa ngo-2019.
Uhulumeni wase-Iran wakhipha isaziso esibomvu ebhekiswe kumongameli wase-United States, uDonald Trump, ngoJanuwari 2021. Lesi saziso sakhishwa ukuze ashushiswe ngokubulawa kukajenene wase-Iran uQassem Soleimani.
Isaziso esibomvu sikhishwe okokuqala esesesihlalweni sabe sesivuselelwa futhi lapho esehla esikhundleni.
Ngo-2013, uhulumeni waseRussia wazama ukwenza i-INTERPOL ukuthi ikhiphe isaziso esibomvu sibhekiswe ku-CEO weHermitage Holding Company, uWilliam Felix Browder.
Ngaphambi kwalokho, uBrowder wayexabene nohulumeni waseRussia ngemuva kokuthi ebafakele icala lokwephula amalungelo abantu nokuphathwa ngonya komngani wakhe nozakwabo uSergei Magnitsky.
UMagnitsky wayeyinhloko yezentela eFireplace Duncan, okuyinkampani ephethwe yiBrowder. Ubefake isimangalo kubaphathi bezangaphakathi baseRussia ngokusetshenziswa ngokungemthetho kwamagama ezinkampani ngenkohliso.
Kamuva uMagnitsky waboshwa esemzini wakhe, waboshwa futhi washaywa yizikhulu. Washona eminyakeni embalwa kamuva.
UBrowder wabe eseqala ukulwa nokungabi nabulungisa okwenziwa kumngani wakhe, okwaholela ekutheni iRussia imxoshe ezweni futhi athathe izinkampani zakhe.
Ngonyaka owodwa ngaphambi kwalokhu, uYanukovych wayexoshiwe kuhulumeni ngenxa yokungqubuzana phakathi kwamaphoyisa nababhikishi, okwaholela ekufeni kwezakhamizi eziningana. Ube esebalekela eRussia.
Futhi ngoJanuwari 2019, waquliswa icala wagwetshwa iminyaka eyishumi nantathu ejele engekho enkantolo yase-Ukraine.
Xhumana neKhomishini Elawula Amafayela we-INTERPOL (CCF). Unelungelo lokufinyelela noma iyiphi idatha i-INTERPOL enayo ngawe emafayilini ayo.
Isigaba ngasinye kulezi singaba nzima ukusisingatha ngaphandle kosizo lommeli ofanelekayo. Futhi-ke, thina, ku Abameli be-Amal Khamis, bayakufanelekela futhi bakulungele ukukusiza kuzo zonke izigaba zenqubo kuze kube yilapho igama lakho selicinyiwe.
Ngenhlanhla, abameli bezomthetho bamazwe omhlaba e Abameli be-Amal Khamis ube nalokho okudingayo. Sizibophezele ekuqinisekiseni ukuthi amalungelo amaklayenti ethu awaphulwa nganoma yisiphi isizathu. Sikulungele ukumela amaklayenti ethu futhi sibavikele. Sikunikeza ukumelwa okuhle kakhulu emacaleni obugebengu bamazwe omhlaba ngokukhethekile ezindabeni zeSaziso Esibomvu.